Blog Reader: [စောလင်းနက်စ်]4New Entries: ဦးသန့် သို့မဟုတ် မီးလျှံကြားက ကြာပန်းတပွင့်
[စောလင်းနက်စ်]4New Entries: ဦးသန့် သို့မဟုတ် မီးလျှံကြားက ကြာပန်းတပွင့်
"ဦးသန့်ဟာ သတင်း မီဒီယာတွေနဲ့လည်း သင့်သင့်မြတ်မြတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေဆီ ဖြန့်ဝေ အသိပေးတဲ့နေရာမှာ မီဒီယာက ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်ထားသူဖြစ်လို့ပါပဲ"လို့လည်း သူက ထည့်သွင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဦးသန့်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့သူ ရာမတ်စ် နာဆစ် ကလည်း"ဦးသန့်ဟာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အတွေ့ အကြုံ ကောင်းကောင်းရှိတဲ့သူပါ၊ သူဟာ သတင်းသမားတွေကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဆက်ဆံ တတ်ပါတယ်၊ စာနယ်ဇင်းအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သူတဦးပီပီ သူဆိုလိုချင်တာကို သတင်းသမားတွေ နားလည် အောင်လည်း ထုတ် ဖော် ပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်"လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
ဦးသန့်ဟာ ကုလသမဂ္ဂတာဝန် မထမ်းဆောင်ခင် ရှေ့ပိုင်း အချိန်ကာလတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း စတဲ့ မြန်မာစာနယ်ဇင်းတွေမှာ စာတွေ ပုံမှန်ရေးသားခဲ့ပြီး "ပြည်တော်သာ ခရီး" အမည်ရှိ အတွဲ ၃ တွဲ ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ် အပါအ၀င် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ဘာသာပြန်နဲ့ ပင်ကိုရေး စာတွေကို ရေးသားခဲ့သူ တဦးဖြစ်ပါ တယ်။
"ဦးလေးသန့်က အင်မတန် သဘောထားပြည့်ဝပြီးတော့ အင်မတန် သဘောကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ၊ စာလည်း သိပ်ဖတ်တယ်၊ ဖေဖေနဲ့က ဆရာလုပ်ကတည်းက ရင်းနှီးတာ၊ နောက် သူတော်လွန်းလို့ ဖေဖေခေါ်တာ ၊ ရန်ကုန် မှာ အစိုးရ အဖွဲ့မှာ အလုပ်လုပ်ကြတာ၊ ဖေဖေက ပြောပါတယ်၊ ကိုသန့်ဟာ အင်မတန် သဘောကောင်း ပြီး အင်မတန် အေးဆေးတဲ့ လူတဲ့၊ သူ့ကို တော်မှန်းသိလို့ ယူအန်ကို ပို့တာပါ၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မဖြစ်ခင်ပေါ့၊ သံအမတ်အနေနဲ့ ၅၇ ခု လောက်က၊ ဖေဖေ လူရွေးမှန်သွားတာလည်း ပါတာပေါ့၊ ဖေဖေ ဘယ်လောက်ရွေးရွေး ဦးလေးသန့်ကိုယ်တိုင်က မတော်ရင်လည်း မဖြစ်ပါဘူး၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဦးလေးသန့်နဲ့က လက်ပွန်းတတီး နေခဲ့တာပါ၊ ဦးလေးသန့် ဂူကို ပန်းချင်းပို့လိုက်ပါတယ်"လို့ ဒေါ်စန်းစန်းနုက ပြောဆိုပါတယ်။
"ဦးသန့်ဟာ သူ့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ အလေးစားခံခဲ့ရတယ်၊ ဒါကြောင့် ဗမာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဦးသန့်အတွက် အင်မတန် ဂုဏ်တက်ခဲ့သလို ဦးသန့်ကိုလည်း ဗမာနိုင်ငံသားတိုင်းက မမေ့အပ်ဘူး၊ ဂုဏ် ပြုထိုက်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်"လို့ သခင်ချန်ထွန်းက ဆိုပါတယ်။
"တိုင်းပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်က စစ်အစိုးရ တွေက အုပ်ချုပ် တယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကျော် လောက်က ပြည်တွင်းစစ်တွေဘာတွေနဲ့ ကြုံရတယ် ဆိုတော့၊ တိုင်းပြည်မှာ အကြီးအကျယ် ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်၊ အဲဒီထဲကနေပြီးတော့ မီးလျှံတွေထဲကနေပွင့်တဲ့ ကြာပွင့် တပွင့် လိုပဲ ဦးသန့်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ နမူနာတွေ၊ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ထူးချွန်မှုတွေ၊ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေမျိုး ကျနော်တို့ ဗမာတွေဟာ အမြဲတမ်း ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိဖို့ကောင်းတယ်၊ ရှိဖို့သင့်တယ်၊ ဗမာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာ ဦးသန့်လို ထူးချွန်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းသင့်တယ်၊ အားထုတ် သင့်တယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ တိုက်တွန်းချင်တယ်"။ ။
Israel rejects calls for ceasefire (အစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှု သတင်း-ဗွီဒီယို)
Dec 31 - Israel rejects calls foraceasefire in the Gaza Strip and stepped up preparations forapossible ground offensive.
The current violence erupted afterasix-month ceasefire ended December 19 and Hamas intensified rocket attacks from the Israeli-blockaded Gaza Strip.
[အင်းစိန် ကရင်ကျမ်းစာသင်ကျောင်း ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲမှ ဒုံးယိမ်းအက ကနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)]
အင်းစိန် ကရင်ကျမ်းစာသင်ကျောင်း ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲမှ ဒုံးယိမ်းအက ကနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)